Translations - The Word Foundation • Fampidirana ny fisainana sy ny faniriana
Fandikan-teny ho azy
Faly izahay manolotra fandikan-teny maoderina amin'ny votoatin'ny HTML ao amin'ny tranokalanay. Ny dikanteny dia natao tamin'ny ordinatera ary misy amin'ny fiteny 100. Midika izany fa ny asa rehetra nataon'i Harold W. Percival dia azo vakiana amin'ny ankamaroan'ny olona eto amin'izao tontolo izao amin'ny fitenin-drazany. Ny dikan-teny PDF an'ny boky Percival sy ny asa sorany dia mitoetra amin'ny teny Anglisy ihany. Ireo rakitra ireo dia ny fanavaozana ny asa tany am-boalohany, ary ity karazana marina ity dia tsy andrasana amin'ny fandikan-teny amin'ny automatique.
Ao amin'ny zoro farany havanana amin'ny pejy tsirairay dia misy mpizara fiteny ahafahanao mandika ny pejy ho amin'ny fiteny tianao.
Amin'ny fipihana ny selector, dia azonao atao ny misafidy ny fiteny tianao hovakina.
Manolotra anao koa ny Fampidirana Fisainana sy faniriana amin'ny fiteny vitsivitsy izay nirotsaka an-tsitrapo hananganana. Izy ireo dia voasoratra etsy ambany eto ambany.
Ity toko voalohany ity dia manolotra ny sasany amin'ireo lohahevitra noresahina tao amin'ilay boky. Manome ny mpamaky indray mandeha ny tontolon-kevitra sy ny solaitrabe ho an'ny boky iray manontolo. Noho izany dia manome fandikan-teny fampidirana an-kalitaon'olombelona izahay rehefa afaka. Tena mankasitraka ireo mpilatsaka an-tsitrapo izay nanampy ny The Word Foundation hametraka ny fandikana an'ity toko voalohany ity izahay. Azafady mifandraisa aminay raha te-handray anjara amin'ny fandikana ny Fampidirana amin'ny fiteny hafa ianao.
Deutsch: Einleitung von Denken und Bestimmung (Alemaina: Introduction to Fisainana sy faniriana)
Esperanto: Enkonduko al Pensado kaj Destinado (Esperanto: Introduction to Fisainana sy faniriana)
Nederlands: Inleiding tot Denken en Bestemming (Dutch: Introduction to Fisainana sy faniriana)
Русский: Введение в Мышление и судьба (Rosiana: Fampidirana Fisainana sy faniriana)
Fampidirana amin'ny teny anglisy
Maro amin'ireo lohahevitra no toa hafahafa. Ny sasany amin'izy ireo dia mety mahagaga. Mety ho hitanao fa mandrisika ny saina izy ireo. HW Percival